သာလွန်ဇောင်းထက်| December 19, 2012 | Hits:15,697
မင်းဇော်ဦး December 19, 2012 - 3:39 pm လတ်စားမှုအဓိက
Reply မင်းအောင် December 19, 2012 - 4:49 pm တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ နိုင်ငံတကာလုပ်နည်းတွေလည်းလေ့လာကြပါအုန်း။
Reply လှမင်း December 19, 2012 - 4:56 pm တရားစွဲတော့ တရားရုံးတွေ အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ လာဘ်စားမှူ တိုက်ဖျက်နေတာလား? လာဘ်စားမှူ တိုးပွားအောင်လုပ်နေတာလား?
Reply pps12345 December 19, 2012 - 5:06 pm သြော် ပွင့်လိုက် ဖွင့်လိုက် စားလိုက်။ အချိန်ကိုက်ကို ဖြစ်လို့။ တိုင်းပြည်မှာ လူကြီးဆိုတဲ့လူတွေနား ကပ်ပြီး ပေါင်းစား လုပ်စား များ စားလို့ဝသွားမှ သူများ လုပ်တာ လိုက်လုပ်တဲ့သူများ အဖမ်းခံရတော့မည်။ တိုင်းပြည်မှာ ဥပဒေဆိုတာ တစ်ခုထည်းရှိတယ် ဆိုပေမယ့် မတူညီတဲ့ လများ အတွက် ညွှန်ကြားချက် တွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားတယ် ဆိုတယ် ပြည်သူတွေ သိသွားပြီ မဟုတ်လား။ ဒါတို့မြေပါ တို့ဘိုးဘွားတွေ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ မြေပါ။ လူတစ်စု အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စာနယ်ဇင်းတွေ မျက်နှာလိုက် ရင်တော့ ပြည်သူလူထု က ကိုယ့်လမ်းကြောင်း ကိုယ်လျှောက် ရပါတော့မည်။ နောက်ပြည်လှန့်မည်ဆိုသော လူဆိုးကြီးကို ငဲ့နေရ သ၍ ပြည်သူများ ဆက်လက်ဒုက္ခ ရောက်နေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။။။
Reply ကျော်စိန် December 19, 2012 - 5:06 pm ကုန်တွေချစစ်တာတွေ့ ရတယ်။ ကုန်တင်ကုန်ချခတွေဘယ်သူပေးမှာလည်း? စားသုံးသူတွေပဲကျခံရမယ်ထင်တယ်။
Reply အောင်အောင် December 19, 2012 - 5:46 pm ယာဉ်မောင်းတွေ/စပယ်ယာတွေပါ တရားစွဲမယ်ဆိုပါလား ကြောက်စရာကြီးပါလား။
Reply Maung Win December 20, 2012 - 12:01 am တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု ပပျောက်ရန် ပြည်တွင်းထွက်ကုန်မှအပ ကျန်လူသုံးကုန်အားလုံး(မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်မပါ) သင့်တော်သော အခွန်သတ်မှတ်ပေး စေခြင်သည်။
Reply mg la December 20, 2012 - 12:49 am How about the big compaines?
Reply Shwe Yoe December 20, 2012 - 7:04 am As long as drugs and arms smuggling do not happen, give them citation and let them pay the fines. Unloading this much from the truck seems illogical. It does not seem like the truck is loaded with expensive goods. Tax evasion and violation of traffic law, just write citations and let them pay at the proper locations. Bribery and handing cash to the officers must not be allowed at all time.
Reply ကုန်သည်တဦး December 20, 2012 - 7:34 pm တရားမ၀င် လမ်းကြောင်းက ယနေ့တိုင်ပျောက်ပျက်သွားခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့ အတူ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလဲ ပို တိုးတက်နေပါသည်။ တရားဝင်အခွန်ပေးဆောင်ရပြန်သော်လည်း ကုန်သည်ကြီး များ မှအပ ကျန်ကုန်သည်လေးများ အတွက် အခွန်နှုန်းထားမှာ မသက်သာပါ။ဂျူတီဆောင်လျှင် one stop service ဆိုသော်လည်း တင်သွင်းကုန်အမယ်သစ်ဖြစ်လျှင် ရက်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းရပြန်ပါသည်။ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး တရားဝင်ထွက်ခွာလာသော ကုန်တင်ယာဉ်တိုင်းကို mobile team အဖွဲ့တည်ရှိရာနေရာတွင် စစ်ဆေးခံရန် နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းရခြင်း၊ ကုန်ပစည်းများ တင်ချခြင်း တို့ ပြုလုပ်ရခြင်း အတွက်ကြောင့် မလိုလားအပ်သော အချိန်ကြန့် ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ mobile teamဟုဆိုသော်လည်း နေရာအတည်တကျ ယူထားခြင်း၊ကုန်တင်ယာဉ်+လူစီးယာဉ် များအားလုံး အားစစ်ဆေးသောကြောင့်ခရီးသွားလုပ်သားပြည်သူများနှင့်ကုန်သည်များမှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရုံသာမက ကုန်စည်မြန်ဆန်စွာ စီးဆင်းရေးအတွက် အတားအဆီးတခုဖြစ်နေပါသည်။ထိုမျှမက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် များနှင့် ရင်းနှီးစွာ ပတ်သတ်သောကုန်သည်ကြီးများအတွက် mobile team မှာအသုံးမ၀င်ပါ။ ကုန်သည်များမှာ ပစည်းစစ်ဆေးချိန်တိုတောင်းသက်သာရန်အတွက် လာဘ်ငွေပေးကာ သွားလာရနေကြောင်း… ထို့ ကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရန်မှာ လုံးဝ.. လုံးဝ… မဖြစ်နိုင်ပါ။ Mobile team အလိုမရှိ။။။။။
Reply မောင်ထင်းရှုး December 21, 2012 - 6:46 am အလကား လျှောက်လုပ်နေတာ
Reply htin thuta December 21, 2012 - 12:59 pm လက်ရှိအဆင်ပြေနေတဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့်ပြု တဲ့ ဥပမာ လိုအားလုံးနီးပါးအဆင်ပြေမယ်နည်းလမ်းမျိုးတွေကို ရွေးချယ် ပြီး တင်သွင်းသူလည်းအဆင်ပြေ
Reply ရန်ကုန်သား December 22, 2012 - 6:35 am ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းခင်ဗျား ..
Reply ကိုဖြိုး December 23, 2012 - 10:30 am mobile teams အဖွဲ့ ဝငိများရှဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ကို တာဝန်မထမ်းဆောင်ခင် ကြေငြာ ခိုင်းတော့ကော ဘာထူးလာမှာလည်း နောက်ပိုင်မှရ တာတွေကို အခြာနည်းတွေများစွာ နဲ့ သိမ်းထားမှာပေါ့။ ဒါမျိုးက စစ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် နေလာတော့ လူတိုင်းလုပ်တပ်နေပါပြီ။တခြာနည်း ကို ပြောင်ပြီးစဉ်းစားကြည့် ပါဗျာ။
Reply I don't know nothing December 25, 2012 - 6:58 pm တကယ်လုပ်ရမှာက နယ်မြေ တစ်ခု ကို One Gate system (Import Gate and Export Gate)
Replyုko pyar February 14, 2013 - 10:14 pm အထက်လူကြီးတွေကတော့ ဖမ်းဖို့ဘဲ လွယ်လွယ်နဲ့အမိန့်ချဖို့ဘဲလုပ်တတ်တယ်